FAMPISORANAANA, FIVAVAHANA, FIFIDIANANA ary PANAOVANA TANANA - shoppingdirect24.com
TOAMASINA, FITIAVANA SY KAMERA
ART REPRODUCTIONS AND PAINTING
PHONE AND COMPUTER-SHOP
AHOANA NO NAMPIASAINA?
HOME, DECORATION AND SHOP GARDEN
COSMETICS AND BEAUTY-SHOP
AOKA ATAO HOREHY NY MPIASA
Home > FIVORIANA, FIVORIANA, FANDINIHANA SY FITSARANA
Naverinao ny volanao raha:
- Ny vokatra azo atolotra dia tsy araka izay voafaritra, na lanjany na loko hafa noho ny baiko
- Ny hosoka dia voaporofo ary nofaritana ho toy ny teo aloha
- Misy vokany hafa ny vokatra voavonjy
Tsy tompon'andraikitra izahay:
- ho an'ny fahavoazana amin'ny fonosana na vokatra vokatry ny serivisy fanaterana mailaka
- raha averina alefa amin'ny alàlan'ny paositra ny tolotra fanafarana mailaka noho ny antony ivelan'ny fanaraha-maso
FIVORIANA & FIVORIAMBE
Faly izahay manolotra fanampiana iraisam-pirenena maneran-tany ho an'ny zava-drehetra! Manafina ny saram-pandefasana - na aiza na aiza misy anareo!
Inona no entana an-tsambo?
Ny fonosana avy amin'ireo mpamokatra, trano famatsiana, mpamatsy na mpaninjara any Shina, Hong Kong na Shanghai dia alefa amin'ny EPacket raha toa ka azonao atao ny manome ny fepetra haingana ho an'ny firenenao ary raha tsy izany dia ny tolotra ara-toekarena indrindra.
Ny sora-baventy ho an'ny vokatra avy amin'ny toerana ara-jeografika hafa dia atao amin'ny fampiasana serivisy serivisy, raha tsy misy torolàlana hafa.
Ny vokatra avy amin'ny fangatahana dia hovokarina sy halefa amin'ny iray amin'ireo zavatra vita pirinty napetrakay sy ny famokarana vokatra. Ho an'ny ankamaroan'ny vokatra entin'ny famokarana vokatra sy fametrahana entana dia any amin'ireo kaontinanta maromaro sy firenena (Etazonia, firenena maro samihafa ary Aostralia). Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra dia ireo fitaovana akaiky anao no hampiasaina hamokarana sy hampidirana ny vokatra. Raha ohatra ianao olom-pirenena EU dia hiezaka izahay hamokatra sy hivezivezena avy any amin'ny Vondrona Eoropeana mba tsy hisian'ny olana amin'ny fomba amam-panao na olana hafa. Ho an'ny Etazonia, Aostralia sy ireo faritra hafa sy vondrom-paritra mitovy lenta dia misy ary azo ampiharina, raha misy. Ny fampiharana dia mety hampiharina sy ilaina amin'ny antony ara-teknika na ny taham-pamokarana vokatra sy ny fahafahana.
Ahoana ny fomba amam-panao?
Tahaka ny hafa retai an-tseraseralers, wTsy azo atao ho tompon'andraikitra amin'ny saram-piantsenana rehetra, ny haba haba na ny saram-pandraharahana eo an-toerana rehefa navoaka ny entana. Ny fari-piainana dia miovaova amin'ny firenena ary misy koa ny fiovana matetika. Amin'ny fividianana ny vokatrao, dia manaiky ianao fa ny entana iray na maromaro hafa dia azo alefa any aminao ary mety handoa saram-pihetseham-po sy handoa saram-bola rehefa tonga any amin'ny fireneny izy ireo ary miankina amin'ny lalànan'ny firenena misy anao.
Azonao atao ny manontany na mikaroka amin'ny aterineto momba ny fepetra momba ny tanindrazanao talohan'ny baiko. Ny ankamaroan'ny entana dia ho avy tsy misy olana toy izany.
Mandra-pahoviana no fandefasana mandray?
Ny fotoana fandefasana dia miovaova amin'ny toerana. Izao no tombatombana azonay, saingy tsy azo antoka:
Toerana misy ny fotoana fandefasana
Etazonia 4-15 Andron'ny asa
Kanada, Eoropa 6-25 Andron'ny asa
Aostralia, New Zealand 6-30 Andron'ny asa
Afovoany & Amerika Atsimo 15-55 Andron'ny asa
Tanjona hafa amin'ny 15-55 raharaham-barotra
Ve ianao hanome Tracking vaovao?
Eny, hampiasa fampahalalana fanaraha-maso raha misy ny baikonao. Hahazo mailaka indray ianao rehefa mandefa ny baiko momba ny baiko izay ahitana ny fampahalalana momba ny fanarahanao.
Zavatra tsy ampy ny milaza hoe "tsy misy fanazavana hita amin'izao fotoana izao".
Ho an'ny orinasam-pitaterana sasany dia mandefa 1-5 andro hikarakarana ny baikonao ary mety haka andro fanampiny momba ny 2-5 ho an'ny fanaraha-maso vaovao amin'ny fanavaozana ny rafitra. Raha napetraka mihoatra noho ny 6 androany ny baikonao ary tsy mbola misy ny fanazavana momba ny lahatahinao, azafady mba mifandraisa aminay.
Dia ny zavatra alefa ao amin'ny fonosana iray?
Noho ny antony ara-logistika, ny entana amin'ny fividianana mitovy dia halefa indraindray amin'ny fonosana samihafa.
Raha manana fanontaniana hafa ianao dia mifandraisa aminay ary hanao izay vitinay izahay hanampy anao.
POLITIKA REFUND sy RETURNS
Na inona na inona antony mahatonga ny famerenana na famerenana hiverenana fangatahana, dia hiezaka foana isika hanapa-kevitra tsara!
Ny baiko rehetra dia azo alefa mandra-pandefasana azy ireo. Raha voavidy ny baikonao ary mila manao fanovana ianao na manafoana baiko dia tsy maintsy mandefa antsika avy hatrany. Raha vantany vao nanomboka ny fikarakarana sy ny fandefasana entana, dia tsy azo esorina intsony izany.
Mahazo vola ianao rehefa:
- Ny zavatra nodidiana dia tsy tonga tao anatin'ny fotoana nampanantenaina - isika dia manana andro pro-forma 60 izay manome antoka ny fandefasana, fa ny ankamaroan'ny vokatra dia tonga haingana aloha kokoa.
- Ny zavatra izay azonao dia azo antoka fa tena izy, fa kosa ny hosoka
Raha misy antony tsy tianao ilay vokatra voarainao dia mety mangataka famerenanana ianao fa tsy maintsy averinao ilay entana ary tsy tokony hampiasaina ilay entana ary ao anaty fonosana tany am-boalohany. Raha tsy izany, noho ny antony ara-toekarena (indrindra ho an'ny vokatra ambany) ary eo ambany fanapahan-kevitray dia mety hangataka fahazoan-dàlana hitazomana ny vokatra ianao, azafady mba mifandraisa aminay aloha.
Azo atao ihany koa ny fialan-tsiny raha nomena loko, maotina, na modely (misy porofo ny foto-kevitra)).
Azo atao ihany koa ny fialan-tsiny raha tLasa tena mahantra izy (ilaina ny porofo [sary]).
Mila mifandray amin'ny serivisy fanaterana mailaka ianao raha:
- Tonga ao anatin'ny fahasimbana ny fepetra
- Tsy hita ny lamandy
Mariho fa mety hanjary kely ny fandrefesana maodim-bidy, satria matetika no alaina ny fandrefesana.
Ny loko eo amin'ny vokatra fotos dia mety tsy mitovy amin'ny vokatry ny lelam-bintana, ny angona fakantsary na ny olana momba ny solosaina.
Tsy afaka manaiky hiverina amin'ny vokatra ateraky ny fangatahana ho anareo izahay. Ny vokatry ny vokatra fangatahana dia fantatra ho toy izany ao amin'ny famaritana vokatra.
Tsy azo atao ny fialan-tsiny raha:
- Ny didinao dia tsy tonga noho ny antony ao amin'ny fifehezana anao (izany hoe manome ny adiresy fandefasana diso, lavitra ny trano mandritra ny fotoana lava sy / na naverina nalefa tamin'ny biraonao)
- Ny didinao dia tsy tonga noho ny toe-javatra niavaka teo amin'ny fifehezantsika (izany hoe tsy nesorin'ny fombafomba, na ny faharetan'ny loza voajanahary).
Misy toe-javatra miavaka hafa ivelan'ny fifehezantsika.
Azonao atao ny manolotra fangatahana amin'ny fangatahana ao anatin'ny 15 andro aorian'ny fotoana azo antoka ho an'ny fandefasana (60 andro). Afaka manao izany ianao amin'ny fandefasana hafatra amin'ny pejy Contact us.
Mariho fa tNy fikarohana sy ny fandoavam-bola dia tarihan'ny orinasa MLVEDA ary ianao dia alefa mankany amin'ny pejiny ho an'io dingana io. Ny fanamarinana sy ny fandoavam-bola dia atao amin'ny volanao voafidy.
Tsy hahita ny antsipiriany momba ny kaonty Paypal na nomerao carte de crédit isika. Ny fampahalalana rehetra toy izany dia mifototra amin'ny mpamatsy vola ihany. Mampiasa ny "Stripe" ho an'ny fanodinana carte de crédit - azo itokisana amin'ny orinasa an-tapitrisany manerantany.
Lisitry ny firenena Fast EPacket
NITOKANA NY FITIAVANA 100 SY RENOVAN'NY 160!
AZONAO FIVAVAHANA TOKOA AZO TIA! FIVORIANA 190
CES DEALS! HAROHAM-PIVAROTANA ARAKA ARY - HANOMPOANA, TONGA, TOOLS, ANTANANO, TOYS
TIANAO MAMPIASA AN-TAFO MORA! RAHA TSY TOKONY HANAKO ZAVATRA INDRINDRA
INTERNET: FAHORIANA, FIVAROTANA, FIVAROTANA ARAKA ARY FIVORIANA
Noely! BOKY VAOVAO, FAMPIDADANA ARY FAHAGAGANA ARY TOKONY TOKONY HITANAO
VOLA MISAOTRA VOLA VOLA ARY TSY HANOTSAKA NY FAHOROANA VOLA! FIVORIANA 20% HODIDINA amin'ny 25%
Zahao ny loharanom-bolako